Ndepụta ekwentị nke ga-emelite na Android 9.0 achịcha n'oge na-adịghị anya | Gam akporosis
Ndepụta nke ekwentị dakọtara na Android 9 Pie
A gam akporo 9.0 achịcha bụ eziokwu, ọ bụ ezie na mbata ya bụ ihe a na-atụghị anya ya. Google na-ewepụta mbipụta ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ya, yana ọtụtụ mgbanwe na ndozi. Enweelarị mmelite ahụ maka ndị ọrụ nwere Google Pixel, ekwentị dị mkpa wee ju anya na ọ bụ ekwentị izizi iji melite. Ọ bụ ezie na n'oge na-adịghị anya, a ga-enwe ụdị ndị ọzọ.
Anyị enweela ndepụta zuru ezu nke smartphones nke ga-enwe ike imelite gam akporo 9.0 achịcha n'oge na-adịghị anya. Yabụ ekwentị gị nwere ike ịbụ otu n'ime ụdị dị na ndepụta a. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndepụta na-eweta ihe ịtụnanya.
Ebe ọ bụ Ekwentị ndị bụ akụkụ nke gam akporo P betas ga-abụ nke na-esote iji melite. Ọ bụ ezie na ugbu a, enyebeghị ụbọchị ọ bụla maka ha. Naanị ikwu ya na ọ ga-ewe izu ole na ole iji rute ekwentị ndị a. Ndepụta zuru ezu bụ ndị a:
Dị ndị a agaghị abụ naanị ndị ga-enwe gam akporo 9.0 Pie n'oge na-adịghị anya. Google kwadoro ya na ụdị nke gam akporo ha ga-enwe ohere a. Zọ dị mma iji kwalite ụdị sistemụ a n'ahịa. Modelsdị ndị kwesịrị ịnata mmelite tupu njedebe nke afọ bụ:
Ndụ U11 HTC
Ọzọkwa, Enweghị ụbọchị a kapịrị ọnụ maka gam akporo 9.0 achịcha iji ruo ụdị ndị a. Ka ha na-ekwu site na Google ha ga-enweta ya tupu njedebe nke afọ a, mana anyị chere na ọ ga-adabere na ụdị ọ bụla. O yikarịrị ka ụdị Nokia ga-ebu ụzọ melite.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Ndepụta nke ekwentị dakọtara na Android 9 Pie
E gosipụtara Fortnite Android chọrọ
Ekwentị dị mkpa maka mmelite gam akporo 9.0 achịcha